2020 Statistika momba ny tahan'ny fiovana SaaS | Martech Zone
Efa nandre momba ny Salesforce isika rehetra, Hubspot, na MailChimp. Nampiditra ny vanim-potoana nitombo tokoa izy ireo Fitomboana SaaS. Ny SaaS na Software-as-a-service, raha tsorina, dia rehefa mampiasa ny rindrambaiko amin'ny alàlan'ny famandrihana ny mpampiasa. Miaraka amin'ny tombony maro toa ny filaminana, tsy dia misy toerana firaketana, manovaova, azo idirana hafa, ny maodely SaaS dia voaporofo fa mahavokatra tokoa amin'ny fitomboan'ny orinasa, manatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa sy ny traikefan'ny mpanjifa.
Ny fandaniana rindrambaiko dia hitombo amin'ny 10.5% amin'ny taona 2020, ny ankamaroany dia ho entin'i SaaS. Ny SaaS sy ny rahona cloud aza dia nahazo fampisondrotana aza noho ny Covid-19 miaraka amin'ireo 57% amin'ireo orinasa mikasa ny hampitombo ny asany.
Gartner ary Flexera
Ny fitomboan'ny SaaS dia azo hazavaina noho ny valiny lehibe azo tamin'ny alàlan'ny fampiasana marketing, fahombiazan'ny mpanjifa, varotra ary fitahirizana. Ny orinasa SaaS dia azo ampitahaina amin'ny zavamaniry. Miaina, manome, mivoatra, mivoatra ary mifanaiky rehefa tonga ny fotoana. Ary arakaraka ny itomboan'ny orinasa dia tonga ihany koa ny mpanjifa. Ireo tahan'ny churn ireo dia mety hisy fiatraikany amin'ny orinasao ary hametra ny fetran'ny tsena sy ny fitomboany.
Taham-panovana SaaS Churn: Nanazava
Ny tahan'ny churn SaaS, apetraka tsotra izao ary asehoy ny tahan'ny famaranana / fanafoanan'ny mpanjifanao efa-ela ny famandrihana azy ireo ao anatin'ny fe-potoana voatondro.
Izy io dia mari-pamantarana ny fampiasam-bolan'ny mpampiasa amin'ny tolotra omena anao mahomby, tanjona, vidiny ary fandefasana. Ny tahan'ny churn dia mamaritra ankoatry ny zavatra hafa, ahoana ny vokatra efa nirotsaka miaraka amin'ny mpanjifa.
Ary ho an'ny fitomboan'ny SaaS, ny tahan'ny fitomboana (fisoratana anarana vaovao, fanimbana sns ...) dia tsy maintsy mihoatra ny taha churn (nofoanana, mpamaky very).
Koa satria ny SaaS dia vinavinaina hitombo manerantany, ny fitazonana ny mpanjifa sy ny fahombiazan'ny mpanjifa dia zava-dehibe mampihena ny tahan'ny churn SaaS. Satria ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia iray amin'ireo mpanavakavaka lehibe ny orinasa mahomby sy ny hafa, ny traikefan'ny mpanjifa dia nanjary lafiny iray lehibe amin'ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny ankapobeny sy ny fitomboan'ny orinasa.
Mba hitazomana anao havaozina amin'ny fironana farany sy hianarana izay tokony hialana, nanangona lisitr'ireo statistika 10 SaaS Churn Statistics ho an'ny 2020 izahay.
Ahoana ny fikajiana ny tahan'ny churn
Mety ho toa tsotra izany, fa raha hikajiana ny tahan'ny Churn ho an'ny lozisialy ho serivisy dia misy nuansa vitsivitsy. Raha tsorina, ny Churn Rate dia ny isan'ny mpanjifa sisa nizara tamin'ny isan'ny mpanjifa tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana refesina… nisaina ho isan-jato. Ity ny Formula Churn Rate:
Zavatra tsy tokony ho adino rehefa manisa an'i Churn:
Tsy maintsy manilika ny mpanjifa vaovao rehetra amin'ireo kajy ireo ianao. Churn dia fampitahana fotsiny ny mpanjifa nofoanana sy efa misy.
Tokony hikajiana amin'ny fampiasana fe-potoana mitovy ianao, saingy mety ho sarotra izany. Angamba ny mpanjifa sasany manana fifanarahana halavana lava, fandaminana fandoavam-bola samihafa, na tolotra… azonao atao ny manasaraka ny kajy arakaraka ny tsirairay hahitana raha toa ka miova ireo vokany.
Tokony hampisaraka ny mpanjifanao amin'ny fifangaroan'ny vokatra na fonosana nosoratana anarana izy ireo. Ity dia hanome anao antsipiriany bebe kokoa momba ny fahombiazan'ny vidiny na ny fonosana vokarinao.
Tokony hikajianao ny taham-pahavitranao mifototra amin'ny loharanon'ny fivarotana sy ny vidin'ny fahazoana. Mety ho hitanao fa ny tahan'ny fihenam-bidy amin'ny fampielezana be indrindra nataonao dia mety hahatonga ilay tetikady ara-barotra tsy maharitra amin'ny fahasalaman'ny orinasanao.
Tokony hikajiana ny churn matetika ianao mba hijerena ny fironanao amin'ny churn ary raha mitombo (tsy fihazonana tsara) na manatsara (fahatokisana ny mpanjifa) rehefa mandeha ny fotoana.
Tsy dia zavatra ratsy foana i Churn… orinasa SaaS maro no mampiasa churn hanoloana ireo mpisera tsy mahasoa amin'ny mahasoa kokoa. Na dia mety manana tahan'ny fikororohana ratsy ianao amin'ireto toe-javatra ireto, dia hahasoa kokoa ny orinasanao amin'ny farany. Fantatra amin'ny hoe Ny karama azo isambolana isam-bolana miverimberina (MRR), izay ny karamanao fanampiny amin'ny mpanjifa vaovao sy efa misy dia mihoatra ny vola miditra azonao noho ny fidinana sy ny fanafoanana.
Statistika 10 SaaS Churn ho an'ny 2020
SaaS churn sy fe-potoana fifanarahana - Orinasa SaaS izay manana fifanarahana amin'ny mpanjifa maharitra 2 taona na mahery dia mety hitatitra ny tahan'ny churn ambany. Ny fifanarahana lava kokoa, na isan-taona na mihoatra, dia nahatonga ny tahan'ny fihenan'ny fihenan-tsasatra miaraka amin'ireo maodely famandrihana iray volana izay niaina taha 14%. Azo isaina izany tsy fivadihana, ny traikefan'ny mpampiasa ary ny fahombiazan'ny vokatra ankoatry ny hafa.
Taham-pisondrotana sy tahan'ny fitomboana - Ireo orinasan-tsolika ambany sy fanombohana dia mety hahitana taha ambony. Ny ankamaroan'ny orinasa mitombo ambany, saika 42%, dia mahita fihenam-bidy avo kokoa noho ny orinasa mitombo avo lenta. Izany dia azo avy amin'ny vokatra, ezaka amin'ny marketing, na fanaon'ny mpanjifa.
Taham-pivoarana isan-taona medaly - Ho an'ireo orinasa izay mahazo vola latsaky ny $ 10 tapitrisa isan-taona, 20% no tahan'ny fihenan'ny taona SaaS isan-taona. Orinasa SaaS antonony dia mamoy ny 5% ka hatramin'ny 7% isan-jaton'ny vola miditra isan-taona. Midika izany fa mihoatra ny roa ampahatelon'ny orinasa SaaS no nanana taha 5% na mihoatra tao anatin'ny herintaona. Ary ny 5-7% dia heverina ho 'churn azo ekena' arakaraka ny haben'ny fandaminana.
Ny tahan'ny varotra SaaS sy ny varotra - Ny fifandraisan'ny mpivarotra sy ny mpanjifa no fototra hitazomana ny mpanjifa sy ny chuck churn. Araka ny lazain'ny MarketingCharts, ny varotra fantsona dia manana fihenam-bidy avo indrindra 17% raha 11% ka hatramin'ny 8% ny salan'isan'ny varotra. Ny varotra anatiny dia manana tahaoka 14%. Ity dia manamafy indray ny maha-zava-dehibe ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny ezaka ataon'ny tena manokana amin'ny fitazonana sy fampitomboana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa.
Fampiharana finday sy tahan'ny fiovana SaaS - Ny tahan'ny fihazonana isam-bolana amin'ny alàlan'ny fampiharana finday amin'ny 41.5% dia fanambarana. Ity dia efa ho avo 4 heny noho ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny interface web araka ny valin-tenin'i Reply.io. Ny fampiharana finday mifandraika mifantoka amin'ny fandefasana vokatra dia nahatonga an'io fihenan'ny tahan'ny fihenam-bidy io.
Serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny tahan'ny Churn - Raha 47% no manome soso-kevitra ny orinasa raha toa ka manome serivisy sy valiny ho an'ny mpanjifa tsara izany, 42% kosa dia namela famandrihana SaaS noho ny tsy fahaizan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Tian'ireo mpampiasa izao ny traikefa mba ho iray manamora ny fahombiazan'ny mpanjifa. Ilaina ny fanavaozana ny fahombiazan'ny mpanjifa hampihenana ny tahan'ny churn.
Isan'ny mpanjifa sy ny sandan'ny Churn - Saika ny 69% amin'ireo orinasa SaaS no mandray ny isan'ny mpanjifa rehefa mandrefy ny tahan'ny churn. Ny 62% dia mampiasa fidiram-bola ho fika tokotanin'izy ireo voalohany hahatakarana ny tahan'ny churn. Ankoatr'izay, ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa dia fomba iray hafa koa handrefesana ny tahan'ny churn.
Fahazoana ny mpanjifa vaovao sy ny sandan'ny Churn - Ataon'ny orinasa laharam-pahamehana ny fahazoana mpanjifa vaovao hijanonana ambony sy hanatsara ny isa. 59% ihany no manome ny laharam-pahamehana ny fanavaozana ny mpanjifa sy ny fahafaham-po. Ity tsy fahampian'ny fahombiazan'ny mpanjifa ity dia miteraka taha ambony. Ny fampiakarana sy ny fivarotana ifanakalozana dia manana tanjaka lehibe hanitarana ny orinasa.
Ny SaaS Quick Ratio - Ny ankamaroan'ny orinasa SaaS izay mivoatra haingana dia manana Quick Ratio 3.9 ka hatramin'ny 1. Na dia benchmark an'i Mamoon ho an'ny fampanantenan'ireo orinasa SaaS aza dia 4, ny orinasa dia naneho vokatra tsara tamin'ny famoahana vola miditra very.
Niakatra ny tahan'ny Churn - Raha 34% ny orinasa nahita ny fihenan'ny tahan'ny churn, 30% no nitatitra fa nitombo ny tahan'ny churn. Azo marihina ihany koa fa ny ankamaroan'ireo orinasa mitatitra tahan-tsolika avo dia miteraka fidiram-bola latsaky ny $ 10 tapitrisa.
Andalana ambany: Manaova ny tehinao SaaS
Ilaina ny manaiky fa ny fitazonana ny mpanjifa, ny tsy fivadihana ary ny fahombiazany no lakilen'ny fitomboana sy ny fahombiazan'ny orinasa. Amin'ny fampiharana fanandramana mialoha ny mpanjifa, afaka mampihena ny tahan'ny churn. Zava-dehibe koa ny manampy ny mpanjifanao hifandray amin'ny SaaS anao mba hahafahan'izy ireo mahazo fomba fijery manandanja ary hanaiky ny valiny ihany koa hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa sy ny famolavolana vokatra. Ny famahana am-pahavitrihana ny olan'ny mpampiasa sy ny fandrefesana ny fampiasana dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny tahan'ny churn ary hampiroborobo ny fitomboana.
Tags: manisa kajy churnkajy churnsaassaas churntahan'ny churn saasstatistika saas churntahan'ny skas haingana
Ahoana ny fomba handefasana ny fandikan-tenyo amin'ny marketing mba hahazoanao tombony amin'ny fisondrotan'ny Ecommerce